सांसद नीतिनिर्माता हुन्, बिकास गर्न ७६१ ओटा कार्यपालिका छन्, राज्यकोषको अनावशयक दोहन नगरौं – Narayani Dainik
सांसदलाई विकास कोषमा ६ करोड : घटाउने होइन, बढाउने तयारी । सरकारले सांसद बिकास कोषलाइ कोरोना महामारीको बेला कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयको सत्तापक्षकै सांसदहरुबाट तिब्र विरोध भएपछी घटाउने होइन बढाउने तयारी गरिएको छ । कहि नहुने जात्रा नेपालमा हुने गर्दछ त्यो मध्ये यो सांसद बिकास कोष पनि एउटा नमुना हो संसारमा कहीं नभएका ट्यालेन्ट सबैकुरामा प्रखर ज्ञानी र इन्जिनियर पनि, ठेकदार पनि, योजना ल्याउन जानेका पनि ।
सांसद नै यति जान्ने बुझ्ने भयपछि स्थानीय निकायको चुनाव किन गरेको ? देश विकासको लागि सरकारी इञ्जियर र योजना आयोग किन बनाएको? सांसद विकास कोषबाट कसै-कसैले मैले अस्पताल बनाएँ पनि भन्ने गरेका छन् । कसैले मैले विद्यालय बनाएँ भन्ने गरेका छन् । विद्यालय, अस्पताल बनाउन पैसा पठाइदिए हुँदैन? बजेट खर्च गर्ने निकाय सांसद हो ? योजना छनोट गर्ने निकाय सांसद हो ? योजना छनोट गर्ने काम योजना आयोगले गर्छ ।
बजेट खर्च गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्छ । यति कुरा सामान्य कुरा हो । भ्रष्टाचार धेरै हुने देशको लिष्टमा यो प्रक्रिया चल्छ । कानुन बनाउन र नीति निर्माता सांसदलाई बदनाम गराउन सांसद हरु नै किन तल्लीन छन् ?
कार्यपालिका अहिले देशमा ७६१ वटा छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा ९ वटादेखि २९ वटासम्म वडा छन् । ती प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षसहित ५ सदस्यहरु छन् । तिनीहरु किन बनाएका रहेछन् ? वडामा पुल हाल्न संघीय सांसद जानुपर्ने भएपछि उनीहरुलाई बनाएको, उनीहरुलाई भत्ता दिएको, अफिस राखेको, चुनाव खर्च गरेको, संघीयता बनाएको के काम लाग्यो ?
बजेट स्थानीय तहमा जानैपर्ने भएता पनि खर्च स्थानीय तहकै कार्यपालिकाले गर्नु पर्छ।‘ राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना तर्जुमा गर्ने छनोट गर्ने र कार्यान्वय कार्यपालिकाले नै गर्नुपर्दछ ।
सांसदमार्फत बजेट विनियोजन गरिने यो कार्यक्रम आफ्ना मान्छेलाई पोस्ने कार्यक्रम भएको छ । कतिपय खाईपाई आएकाहरु बिरुद्द बोल्यो लेख्यो भनेर सांसदहरु दुखी होलान् त्यो बेग्लै कुरा हो र मलाई कोही रिसाएर मतलब पनि छैन् तर विषय के हो भने मुख हुँदा हुँदै नाकले पानी खाने गलत अभ्यास र यही अभ्यासको नाममा ढुकुटीको निरन्तर दोहन अकल्पनीय र खेदजनक छ ।यो विकास कोष बन्द नहुन्जेल मेरो विरोध भइरहन्छ । सांसद विकास कोषबाट धेरथोर विकास त हुन्छ तर, सय रुपैयाँमा २५ रुपैयाँ मात्रै ।
बजेट छरिएको छ, छरिएका कारण देशमा राम्रो काम हुन पाएको छैन । कनिका छरेर कुखुराको चल्ला लाई खुसि बनाए जस्तो सांसद विकास कोषको रकम छरेर कार्यकर्ता खुसि त होलान् तर देश र जनताको गरिबी र विकासको चाहनामा भइरहेको विभत्स बलात्कारको जबाफदेही को ?